कम्पनी गठन जापान मा - सुरु - सबै वकिल जापान मा अनलाइन. सबै भन्दा ठूलो कानूनी पोर्टल को वकिल.
कम्पनी गठन जापान मा - सुरु
लगानीकर्ताले सबै भन्दा देखि दुनिया मा चासो हो सुरुको एक कम्पनी, जापान मा कारण धेरै व्यापार फाइदा । जापानी कानून आवश्यकता छैन एक न्यूनतम शेयर राजधानी को दर्ता लागि एक सीमित दायित्व कम्पनी । जापान को लागि प्रसिद्ध छ यसको समर्थक-व्यापार वातावरण, दक्ष आकर्षित मा व्यापक-लिएर विदेशी धन र महत्त्वपूर्ण विदेशी कारोबार छ । जापान बढावा अनुसन्धान र विकास र राम्रो छ प्रतिशत यसको जीडीपी गर्न समर्पित अनुसन्धान र विकास गतिविधिदेश को एक छ सबै भन्दा ठूलो र सबैभन्दा जटिल अर्थव्यवस्था दुनिया मा र छ पनि छलफल भएको एक प्रतिस्पर्धी देश मा व्यापार गर्न. को धेरै प्रकार छन् कम्पनीहरु को लागि उपलब्ध संस्थापन भनेर प्रस्तुत विभिन्न फाइदा लगानीकर्ताले लागि । हाम्रो विशेषज्ञहरु मा कम्पनी दर्ता मा जापान मा विशेष बनाउन को सबै प्रकार कम्पनीहरु यो देश मा. संयुक्त स्टक कम्पनीहरु र सीमित दायित्व कम्पनीहरु उपयुक्त छन् कर्पोरेट प्रकारका गर्दा ती जो लगानीकर्ताले शेयर यस्तै व्यापार लक्ष्य रुचि सामान्य साझेदारी । सीमित दायित्व साझेदारी छ एक सुविधाजनक व्यापार फारम ती लागि जो लगानीकर्ताले आवश्यकता सीमित दायित्व रूपमा सुरक्षा को मामला मा एक कम्पनी, तर अझै पनि इच्छा अन्तर्गत सञ्चालन गर्न एक साझेदारी । विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्दै जापान र छन् केही औपचारिक प्रतिबन्धको मा लगानी मा चयन आर्थिक क्षेत्र । लगानीकर्ताले दिन आवश्यक विशेष योजना बनाउने मा एक लगानी मा व्यापार क्षेत्रहरु जस्तै प्रसारण र संचार, एयरोस्पेस, हवाई, समुद्री परिवहन वा आणविक ऊर्जा. सरकारले प्रतिबन्ध सक्छ निवेश मा यी विशेष क्षेत्रमा भने यो कि विश्वास यस्तो कार्यहरू खतरामा थियो राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्था छ । विदेशी मुद्रा र विदेशी व्यापार व्यवस्था प्रदान विवरण मा निवेश लागि विशेष विभाग विदेशी प्रत्यक्ष लगानी छ । कम्पनी गठन जापान आवश्यकता केही औपचारिकताएँ छ । यो कदम हामी यहाँ प्रस्तुत लागि लागू शामिल एक सीमित दायित्व कम्पनी, जापान मा. यो सबैभन्दा साधारण व्यापार प्रकार फेला, यो देश मा लगानीकर्ताले गर्न चाहन्छु जो खुला को यस प्रकार को कम्पनी मा एक युरोपेली देश उदाहरणका लागि, फारम, एक कम्पनी मा साइप्रस प्राप्त गर्न सक्छन्, सहयोग हाम्रो साझेदार देखि. यो जापानी बराबर को सीमित दायित्व कम्पनी मा जो सदस्यहरू मात्र उत्तरदायी को हदसम्म आफ्नो योगदान गर्न कम्पनी गरेको राजधानी । नयाँ कम्पनीहरु ऐन मुख्य कानूनी स्रोत कि व्यापार को यस प्रकार मा, साथै अन्य प्रकार कम्पनीहरु को लागि उपलब्ध छन् कि संस्थापन जापान मा. चाहने लगानीकर्ताले गर्न खुला यस्तो कम्पनी जापान मा थाहा हुनुपर्छ कि यो कम्पनी गर्दैन छ एक न्यूनतम शेयर राजधानी आवश्यकता जब, यो दर्ता छ, तर, सदस्य गरेको योगदान मात्र हुन सक्छ गरे नगद वा गैर-नगद सम्पत्ति र सेवा । को दर्ता एक मा कम्पनी जापान लिन्छ कम लगभग दस दिन गर्दा सबै कागजात क्रम मा हो. पछि विशेष परमिट र लाइसेन्स आवश्यक हुन सक्छ हाम्रो कम्पनी गठन एजेन्ट जापान मा मदत गर्न सक्छ व्यवसायी संग प्रक्रिया को मस्यौदा महत्त्वपूर्ण कागजातहरू आवश्यक खोल्न क्रम मा, एक कम्पनी, जापान मा यस्तो संस्था को लेख.
एक कम्पनी मा अर्को अधिकार क्षेत्र छ । हाम्रो साझेदार सहयोग गर्न तयार छन्, तपाईं गर्न चाहनुहुन्छ कि एक कम्पनी स्थापित मा भारत वा स्थापना एक अपतटीय कम्पनी बेलिज.
हामी पनि तपाईंलाई मदत गर्न सक्छन् खुला, एक कम्पनी मा एक युरोपेली देश, जस्तै भयो । एक आइरिस कम्पनी, हाम्रो साथी व्यवस्था दृढ वकिल. हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क को व्यापार सलाहकार र वकिल मदत गर्न सक्छ तपाईं एक कम्पनी स्थापना मा धेरै.
जापानी लेखा स्तर लागू गर्न सबै कम्पनीहरु र कम्पनी मालिकको तयार हुनुपर्छ र पेश वित्तीय बयान मा एक वार्षिक आधार छ । छ कि कम्पनीहरु भन्दा बढी पाँच सय मिलियन येन राजधानी आवश्यक नियुक्त गर्न बाह्य लेखापरीक्षक.
कर वर्ष साधारण रूपमा नै पात्रो वर्ष, तर यो हुन सक्छ, अर्को बाह्र-महिना अवधि रूपमा, कम्पनी रोज्ने मा यसको संस्थापन. शाखा साधारण आवश्यक छ नै आर्थिक वर्ष रूपमा, टाउको कार्यालय विदेश । दुवै विदेशी र स्थानीय उद्यमिहरु गर्न खोजिरहेका खुला कम्पनीहरु जापान विचार गर्नुपर्छ पक्षहरू निम्न: हाम्रो जापान कम्पनी गठन सलाहकार प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् मा विदेशी लगानीकर्ताले संग आफ्नो सम्बन्ध अधिकारीहरूले समयमा दर्ता प्रक्रिया को कम्पनी. संस्था को लेख सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज तयार गर्न खोल्दा एक कम्पनी, जापान मा, कुनै कुरा यो उद्योग सञ्चालन हुनेछ । यी हुनु पर्छ निम्न जानकारी: यो विख्यात गर्नुपर्छ भन्ने संस्था को लेख तयार हुनुपर्छ अनुसार को प्रकार संग कम्पनी स्थापित । सबैभन्दा विदेशी लगानीकर्ताले सुरुको कम्पनीहरु जापान मा अक्सर आश्चर्य कति समय र पैसा लिन्छ दर्ता गर्न व्यापार । हाम्रो कम्पनी गठन एजेन्ट मा जापान तयार छन् एक समय सम्बन्धित प्रक्रिया को एक व्यापार शुरू: जापानी कर लगाउने काम सिस्टम एकदम विस्तृत छ, त्यसैले यो उचित संग परामर्श गर्न एक कर विशेषज्ञ शीर्षकमाथिको अघि एक कम्पनी र कुनै पनि लागि लेखा र कर दाखिला कार्यवाही कम्पनी दर्ता प्रक्रिया जापान मा हुन सक्छ, एकदम लामो र गर्न सक्छन् विस्तार केही महिना भन्दा - माथि गर्न दुई महिना को प्रकार मा निर्भर कम्पनी छान्नुभएको छ । हाम्रो कम्पनी दर्ता एजेन्ट मा जापान सिफारिस सीमित दायित्व कम्पनी को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ सबै प्रकार को गतिविधिहरु र छ जो सबै भन्दा राम्रो लागि अनुकूल विदेशी लगानीकर्ताले । शेयर राजधानी आवश्यकताहरु को प्रकार मा निर्भर कम्पनी निवेशक खोल्न चाहनुहुन्छ: एक आवश्यकता हुनेछ एक को लागि एक निजी सीमित दायित्व कम्पनी र, को मामला मा एक सार्वजनिक कम्पनी हो । हो, विदेशी लगानीकर्ताले पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ अपतटीय कम्पनीहरु मा जापान । यदि तपाईं विचार गर्दै छन् शुरू को यस प्रकार कम्पनी र थाहा छैन कुन देश छनौट गर्न, हामी तपाईं सिफारिस सम्पर्क गर्न हाम्रो साझेदार पुल पश्चिम - एक दृढ मा विशेष अपतटीय कम्पनी गठन मामिलामा । अधिक विवरण लागि मा कम्पनी दर्ता जापान र लगानी.
जापान: भिसा, अध्यागमन, संस्थापन, कार्यालय प्रोफाइल
শ্রম আইন, জাপান এর